၂။ အာဠာဝကဘီလူးကို အောင်တော်မူခြင်း။ Alavaka, the Man-eating Demon, 節的贊助的勝利 - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
၂။ အာဠာဝကဘီလူးကို အောင်တော်မူခြင်း။ Alavaka, the Man-eating Demon, 節的贊助的勝利
Posted by ukkmaung on October 27, 2010 at 11:00am
အာဠ၀ီပြည် အစိုးရတဲ့ အာဠ၀ကမင်းဟာ သူခိုး ဓမြရန်၊ အတိုက်အခံမင်းတို့ရဲ့ ရန်ကို နှိမ်နင်းဖို့ ရည်ရွယ်ကာ အလေ့အကျင့်ဖြင့်စေရန် (၇)ရက်တစ်ကြိမ်
နောက်ပါမျာားနဲ့အတူ သမင်တော့သို့ တောလည်ထွက်ကြပါတယ်။ အာဠ၀ကမင်းဟာ
သမင်တစ်ကောင်ကို လိုက်ရာ သုံးယူဇနာအရောက်မှာ ဖမ်းမိပြီး သမင်ကို ထမ်းကာ
ယူဆောင်လာခဲ့ရာ တစ်နေရာမှာ ပညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။
ဒီပညောင်ပင်ကို အပိုင်စားရထားတာက အာဠ၀ကဘီလူးပါ။ ဘီလူးက မင်းကြီးအား
စားရန်လုပ်တဲ့အခါ မင်းကြီးက “အသင်ဘီလူး….တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီး
သင်စားဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို လူတစ်ယောက်ကျ လွတ်ပေးပါ့မယ်။ ငါ့ကိုတော့
လွတ်ပါ” လို့ပြောပါ တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဘီလူးက မင်းကြီးအား တိုင်းပြည်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ် ၊
နန်းတော်ရောက်တော့ မြို့တော်ဝန်အား အကြောင်းစုံ ဖြစ်ခဲ့ပုံ တို့ကို
တိုင်ပင်ပြောဆိုရာ မြို့တော်ဝန်က “ အရှင်မင်းကြီး ဒီအတွက် မပူပါနဲ့
ကျွန်တော်မျိုးတာဝန်ထား၊ အရှင်မင်းကြီးသာ အေးချမ်းစွာနေပါ” လို့ပြောကာ
ထောင်ထဲက ရာဇ၀တ်သားများကို တစ်နေ့ တစ်ယောက်ကျနှုံးဖြင့် လွတ်ရာ ကြာတော့
ထောင်ထဲတွင် ရာဇ၀တ်သား မရှိတော့လောက်အောင် ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီလိုနဲ့မရတော့တဲ့အခါ မြို့ထဲရှိ လူအိုများကို ပို့စေပါတယ်၊
လူအိုများလည်း ကြာတော့ကုန်သလောက်နီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီ၊ အဲဒါနဲ့ ပက်လက်အရွယ်
ပုခက်တွင်းနေ ကလေးသူငယ်များကို တစ်နေ့တစ်ယောက်ကျ ပေးပို့စေပါ တယ်။
မိခင်များကလည်း မိမိကလေး ဘီလူးရန်မှ လွတ်မြောက်ရန် အရပ်တစ်ပါးသို့
တိမ်းရှောင်သွားကြကာ အသက်ကြီးမှ ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့
(၁၂)နှစ်ကြာခဲ့တယ်။ ကလေးသူငယ်များလည်း အာဠ၀ကမင်းသားလေးမှတစ်ပါး ဘယ်သူမှ
မရှိတော့ပါ။ ဒါနဲ့ မင်းကြီးဟာ သူ့အသက်ရှင်ဖို့အရေး သူ့ရဲ့
ရင်သွေးလေးဖြစ်တဲ့ မင်းသားလေးကိုပါ ဘီလူးထံသို့ ပို့စေလိုက်ပါတယ်။(လောကမှာ
တစ်နေ့မှာ ဘုရားရှင်ဟာ ဗုဒ္ဓစက္ခုဖြင့် သတ္တလောကကြီးကို ကြည့်တော်မူတဲ့အခါ အာဠ၀ကမင်းသားလေးရဲ့ အနာဂါမိဖိုလ်တည် ကြောင်း ရှေးကောင်းမှု၊ အာဠ၀ကဘီလူးရဲ့
သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ်တည်ကြောင်း ရှေးကောင်းမှု၊ တရားဆုံးတဲ့အခါ ပရိသတ်
(၈၄၀၀၀)အား သစ္စာလေးပါး သိမြင်နိုင်ကြမယ့် အရေး မြင်တော်မူပါတယ်။
သို့နှင့်မနက်တွင် ဘုရားရှင်ဟာ သာဝတ္ထိပြည်မှ ယူဇနာ(၃၀)ကွာဝေးတဲ့
အာဠ၀ကဘီလူးရှိရာ ဘုံဗိမာန်သို့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အာဠ၀ကဘီလူးက
သူ့ဗိမာန်မှာ မရှိပါ။ ဟိမ၀န္တာသို့ ဘီလူးများ အစည်း အဝေးသို့
သွားနေခိုက်ဖြစ်တယ်။ (တစ်ချို့အကြောင်းများကို စာအိုင်မှာစိုးတဲ့အတက်
ဘီလူးများအစည်းအဝေးတွင် (အရိယာနတ်) သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးက ဘုရားရှင်ရဲ့
တန်ခိုးတော် အာနုဘော် မည်မျှကြီးပုံ အကြောင်းကို ပြောဆိုကြရာ
(ပညာမရှိသူကို ပညာနဲ့စပ်တဲ့စကားကိုး သွားပြောရင် မကြိုက်ချေ။) သို့နှင့်
ဘီလူးအရှေ့မှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တွေကို ပြောဆိုနေတဲ့အတွက် ဘီလူးက
မနှစ်သက်တဲ့ အပြင် ဒေါသအမျက်ထွက်ကာ “သင်တို့ဆရာ ဘုရားကပဲ တန်ခိုးကြီးသလား
၊ ငါကပဲ တန်ခိုးကြီးသလားဆိုတာ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့” လို့ဆိုကာ ယူဇနာ
(၆၀)ပမာဏရှိတဲ့ ကေလာသတောင်ထိပ်ပေါ် ခြေဖြင့် ဆောက်နင်းနင်းကား “ အာဠ၀ကဆို
ငါပဲ ကွ” လို့ အော်လိုက်တဲ့ အသံကြီးဟာ
ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့ လူအများ အကုန်ကြားရတယ်လို့
ဘီလူးရဲ့ အာနုဘော်ကြောင့် ယူဇနာ(၃၀၀၀ -မိုင်ပေါင်း၂၄၀၀၀) အပြန့်ကျယ်တဲ့ ဟိမ၀န္တာတောင်ကြီးတစ်ခုလုံး သိမ့်သိမ့်တုန်သွားခဲ့တယ်။ အာဠ၀ကဘီလူးဟာ
ဘုရားရှင်အား လက်နက်ကြီး (၉)မျိုးတို့နှင့်
တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသော်လည်း ဘုရားရှင်အား လက်ရှိနေရာမှ အဝေးထွက်သွားအောင်
မတတ်နိုင်ပါ။ သို့နှင့် လက်နက်အမျိုးမျိုး စွဲကိုင်ထားတဲ့
ဆင်၊မြင်း၊ရထား၊ခြေလျင်စတဲ့ စစ်အင်္ဂါလေးပါးဖြင့် ဘုရားရှင်အား
တိုက်ခိုက်ပြီး အနှောက်အယှက်ပေးခဲ့တယ် ။ မနိုင်တဲ့အဆုံး “ဘယ်သူမှ
မနိုင်တဲ့ ဘွဲ့ဖြူပုဆိုး နတ်လက်နက်နှင့် ပစ်ရရင်ကောင်းမယ်” လို့တွေးပြီး
ဘွဲ့ဖြူလက်နက်ကို ကိုင်ကာ ရပ်နေပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဘုရားရှင်က ဘီလူးအား တရားဟောဆုံးမမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့်
တရားနာချင်၊ စစ်တိုက်တာကိုကြည့်ချင် တဲ့ အကြောင်းကြောင့် ထိုအချိန်က
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ နတ်ဗြဟ္မာများနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတော့တယ်။ ဘီလူးက
ဘယ်လိုပင်တိုက် ခိုက်သော်လည်း ဘုရားရှင်ရဲ့ မေတ္တာတော်ကြောင့် ဘယ်လိုမှ
မနိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားအား မေတ္တာပျက်အောင်လုပ်မယ်လို့ ကြံပြီး
ဒေါသထွက်ဖွယ် အမျိုးမျိုး ပြောကြားသော်လည်း မနိုင်ခဲ့ပေ။
တစ်ဖန် “အမေးပုစ္ဆာပြဿနာကိုမေးမယ် မဖြေနိုင်လို့ကတော့ ဂေါတမခြေကိုကိုင်ပြီး
ဂင်္ဂါဖြစ်တဖက်ကမ်းကို လွဲပစ်လိုက်မယ်” လို့ ပြောပြီး ပုစ္ဆာများမေးပါတယ်။
လောကမှာ ဘယ်အရာဟာ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်သလဲ။
အဘယ်တရားကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပွားမယ်ဆိုရင် လူ၊နတ်၊နိဗ္ဗာန် သုံးတန်ချမ်းသာကို ရောက်နိုင်ပါသလဲ။
အရသာအပေါင်းမှာ ဘယ်အရသာဟာ အချိုမြိန်ဆုံး ဖြစ်ပါသလဲ။
အဘယ်တရားနဲ့ အသက်ရှည်ခြင်းဟာ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါသလဲ။ လို့ ပြဿနာလေးရပ်ကို မေးပါတယ်။
လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသော သဒ္ဓါတရားဟာ လောကမှာ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်တယ်။
ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ဆိုတဲ့ ကုသလကမ္မပထတရား (၁၀)ပါးဟာ လူနတ်နိဗ္ဗာန် သုံးတန်ချမ်းသာ ကို ရောက်နိုင်ပါပေတယ်။
အရသာအပေါင်းမှာ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုသာ ဆိုတတ်သော သစ္စာစကားဟာ အကောင်းဆုံးအရသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ အကျင့်ပဋိပတ်တို့ကို မပြတ်ပွားများပေးရတဲ့ ပညာတရားနဲ့ အသက်ရှည်ခြင်းဟာ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လို့ ဖြေလိုက်တဲ့ တရားတော်ကို အာဠ၀ကဘီလူး ကြားနာရပြီး
နောက်ပြဿနာလေးရပ်ကို ထပ်မံပြီး မေးလိုက်ပါတယ်။
အဘယ်တရားနဲ့ သြဃလေးဖြာကို ကူးမြှောက်နိုင်ပါသလဲ။
အဘယ်တရာားဟာ ဘ၀သံသရာကို ကူးမြှောက်နိုင်ပါသလဲ။
အဘယ်တရားတို့ဖြင့် ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲ။
အဘယ်တရားတို့ဖြင့် ကိလေသာမှ ကင်းဝေးနိင်ပါသလဲ။
သဒ္ဓါတရားနဲ့ သြဃလေးဖြာကို ကူးမြောက်နိုင်ပါတယ်။
ကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်ရန် အဖန်ဖန် ထပ်ထပ် မမေ့မလျော့အောင် ထားရတဲ့ အပ္ပမာဒ သတိတရားဟာ ဘ၀သံသရာမှ ကူးမြောက်နိုင်ပါတယ်။
၀ီရိယတရားဖြင့် ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်။
ပညာတရားဖြင့် ကိလေသာမှ ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။ လို့ ဖြေတော်မူပြီးတဲ့အခါ အာဠ၀ကဘီလူးဟာ သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ်မှာ တည်ခဲ့ပါတယ်။ သောတာပန် ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း
သို့နှင့် အာဠ၀ကဘီလူးဟာ အာဠ၀ကမင်းသားလေးအား မစားတော့ပဲ ဘုရားရှင်အား ဆက်ကပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ထိုမင်းသားလေးကို လက်တော်ဖြင့် ခံယူတော်မူကာ
“ ဒီကလေးငယ်ကို ကျွေးမွေးကြပြီး ကြီးလာရင် ငါဘုရားအား ပြန်လည်ပေးအပ်ရမယ်”
လို့ ပြောတော်မူကာ မင်းချင်းယောက်ျားများလက်သို့ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွင်ပဲ
ဘုရားရှင်ရဲ့ အာဠ၀ကဘီလူးကို အောင်မြင်ပုံ ဒုတိယ အောင်နိုင်ခြင်း
မာရာတိရေက မဘိယုဉ္ဇိတ သဗ္ဗရတ္တိံ
ဃောရံ ပနာဠ၀က မထဒ္ဓယက္ခံ
ခန္တီသုဒန္တ၀ိဒိနာ ဇိတ၀ါ မုနိန္ဒော
တံတေဇသာ ဘ၀တုမေ ဇယမင်္ဂလဂ္ဂံ။ ။
2 Alavaka, the Man-eating Demon
The demon Alavaka once spared the King of Alavi in exchange forasubstitute victim every day乕During the next twelve years he devoured 4,320 people. On the day before the Crown Prince, stillababy, was to be eaten,
Buddha visited Alavaka's celestial mansion while the demon was away, and
waited inside. Returning home, Alavaka was furious. Using nine kinds of
deadly weapons, he tried the whole night to drive Buddha out, but
completely in vain. By the power of universal love, Buddha calmly
withstood every attack.
Alavaka then changed his strategy and asked the questions his parents had been taught by the previous Buddha. Buddha's answers softened the demon's
mind. Buddha showed him the Right
Path, and at daybreak he attained Sottapatti Enlightenment.
When the king's men arrived and handed the Crown Prince to Alavaka for breakfast, the demon was ashamed of himself and gave the baby to Buddha.
Buddha blessed both baby and demon and returned the baby to the king's
men. From that time on, the people of Alavi revered Alavaka asaprotector
deity of babies. When the Crown Prince grew up, he attended Buddha and
attained Anagami Enlightenment, becoming one of the chief lay
The demon Alavaka once spared the King of Alavi in exchange forasubstitute victim every day，During the next twelve years he devoured
4,320 people.惡魔Alavaka曾經倖免於國王阿拉維換取替代的受害者，每天在未來的12年裡，他吃掉4,320人。 On
the day before the Crown Prince, stillababy, was to be eaten, Buddha
visited Alavaka's celestial mansion while the demon was away, and
waited inside.在王儲的前一天，還是個嬰兒，是為了吃，佛參觀Alavaka的天體，而豪宅惡魔不在家，等候在裡面。 Returning home, Alavaka was furious.回家後，Alavaka大怒。 Using nine kinds of deadly weapons, he tried the whole night to drive Buddha out, but completely in vain.用九種致命武器，他嘗試了整個晚上開車佛了，但完全是徒勞的。 By the power of universal love, Buddha calmly withstood every attack.由電力博愛，佛陀平靜地經受住每一次進攻。
mind. Alavaka然後改變他的策略問題，並要求他的父母已經由前佛陀教導。佛陀的回答軟化惡魔的心。 Buddha showed him the Right Path, and at daybreak he attained Sottapatti Enlightenment.佛給他正確的道路，並在拂曉他獲得Sottapatti啟示。
When the king's men arrived and handed the Crown Prince to Alavaka for breakfast, the demon was ashamed of himself and gave the baby to
Buddha. Buddha blessed both baby and demon and returned the baby to the
king's men.當國王的人來了，遞給了王儲到Alavaka早餐，惡魔對自己感到羞恥，給寶寶佛。菩薩保佑嬰兒和惡魔，回到孩子到國王的人馬。 From that time on, the people of Alavi revered Alavaka asaprotector deity of babies.從那時起，人們崇敬的阿拉維Alavaka作為保護神的孩子。 When the Crown Prince grew up, he attended Buddha and attained Anagami Enlightenment, becoming one of the chief lay disciples.當皇太子長大，他參加並取得Anagami佛陀的啟示，成為一個行政俗家弟子。
2。 More than (even) Mara contending all night through, 多（雙）瑪拉爭奪所有通宵， Indeed, the fierce and obdurate yakkha alavaka, 事實上，激烈的和頑固yakkha alavaka， Through forbearance, the well trained method, the Lord of Sages won. 通過忍，訓練好的方法，主的先賢韓元。 Through that power may there be victorious auspices to you. 通過這一權力可能有勝利的主持下給你。
Video ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။